ट्रेण्डिङमा कृशल र सेड्रिना “ओढेर घूँघट” (भिडियोसहित….) | Matrisandesh
ट्रेण्डिङमा कृशल र सेड्रिना “ओढेर घूँघट” (भिडियोसहित….)
काठमाडौँ । नेपाल आइडल सिजन २ बाट चर्चित बनेका कृशल कडेल र किशोरी नायिका सेड्रिना शर्माले अनस्क्रिन शेयर गरेको गीत र म्युजिक भिडियो दर्शकहरुले अत्याधिक मन पराएका छन। यसके युट्युबमा २४ घन्टा भित्र झण्डै ५ लाख पटक हेरिएर नयाँ कीर्तिमान पनि बनाएको छ।
‘ओढेर घूँघट’ बोलको यो गीत उदयीमान गायज कृशलको डेब्यु गीत हो र यो समाचार तयार पार्दा सम्म गीत युट्युबमा ९ लाख पटक हेरिएको छ र ट्रेण्डिङ पनि उकालो लाग्दै ८ मा आइपुगेको छ। यस अघि यो जोडी संगै अन्तरवार्ता दिएर युट्युबमा भाइरल भइ ट्रेण्डिङ्ग परेको थियो। बहुसंख्यक फ्यानहरुले उनीहरुलाई संगै स्क्रिनमा हेर्ने चाह पनि राखेका थिए। कृशल नेपाल आइडलको दोस्रो सिजनमा टप ८ मा पुग्न सफल भएका थिए।
सेड्रिनाले यस अघि पनि “नाईँ नभन्नु ल ५” अभिनय गरेर चर्चामा आएकी थिइन।
चर्चित संगीतकार अर्जुन पोखरेलको संगीत रहेको यस गीतमा गीतकार गजलकार नृपेश उप्रेतीको शब्द रहेको छ। यसमा गोपाल रसाईलीको संगीत संयोजन रहेको छ। म्युजिक भिडियोलाई भद्रगोलका निर्देशक दिपक आर्चायले निर्देशन गरेका हुन् भने कोरियोग्राफी तेन्जु योञ्जनले।
यसैगरी म्युजिक भिडियोलाई अर्जुन तिवारीले छायांकन गरेका हुन भने चन्दन दत्तले सम्पादन गरेका हुन ।
वाम गठबन्धनको पक्षमा जनलहर,कसले कहाँ जिते(सुचिसहित)
पार्टीलाई विजयी गराउन ओलीको कार्यकर्तालाई निर्देशन
गायक अमृत खातीको तिहार कोसेली “हजुरको आँगनी” (भिडियो)